Umhlaza woMntwana: Umhlaza wamantombazana kunye neempawu zamakhwenkwe kunye noBuntu | Iimpawu zeZodiac zaBantwana - Iimpawu Zezodiac
Umhlaza womntwana: Iimpawu, Ubuntu kunye neempawu
Iimpawu, Ubuntu kunye neempawu
Umhlaza wabantwana ngabokuqala bohlobo olusimahla.
Bangabaphuphi bamaphupha abonwabela ukudala iihlabathi ezintle ukusuka kwingcinga yabo etyebileyo.
Mhlawumbi ezona zibuthathaka zeZodiac's Water Signs, iiCancereans zinokubonakala ‘ingezo zeli hlabathi’ kuba enye yazo iyenza ikhuseleke kakhulu kumphefumlo kabani.
Kule nto, abantwana abanomhlaza zii-sprites ezihambelana nobomi bethu basemhlabeni.
Uluhlu loMhlaza womntwana
Iimpawu, Ubuntu, kunye neempawu
Buyela kubo bonke abantwana beAstrology kunye neZodiac Signs
Iimpawu zomhlaza womntwana, ubuntu, kunye neempawu
Baphuma phantsi kweqokobhe labo leCrab ukuba badlale kwaye badanise kule nyaniso kodwa baya kukhawulezisa babuyele kukhuseleko lwezithunzi zalo kwelona lizwi lincinci lokungaboni ngasonye.
Ungayigcini intlalo, intwana yakho yanelisekile yincwadi elungileyo okanye imovie ngenxa yenkampani yabanye. Xa ekunye neqela, sukulindela inkokeli. I-Initiative ayisiyi-Forte's forte ngaphandle kokuba yinto eza nabo bodwa.
Umntwana onomhlaza kunzima kakhulu ukuba afundwe. Abanikezeli ngeemvakalelo zabo ngokulula kwaye bahlala benentloni kwaye belumkile, bebuyela kwiqokobhe lokukhusela.
Oku kwenzeka kuba uninzi lwabantwana abazalwe phantsi kweempawu zamanzi baziva izinto nzulu kakhulu kodwa abazi ukuba mabenze ntoni ngayo yonke loo mvakalelo.
Kuza kukuthatha ixesha ukufumana indlela yokubenza bavule ngaphandle kokukhathazeka malunga nokusabela okuza kubakho.
Ngaba ii-aries kunye ne-libra ziyavana
Malunga nonxibelelwano nomama notata, zilungiselele ukungathethi phandle.
Aba bantwana 'abayeki'. Bawuthumela umyalezo wabo ngokuzola, kodwa bayatshintsha. Into abayithandayo ngolunye usuku isenokungasebenzi kolandelayo, kwaye ngamanye amaxesha bafuna nje ukuba bodwa.
Le yimpendulo eqhelekileyo yokhuselo kunye nendlela abanokuthi ngayo basuse konke ukungqubana ezingqondweni zabo.
Uninzi lweCancer abantwana batsaleleka kubazali babo nakwabanye abantu abadala kuba oku kunika ukhuseleko olukhulu.
Abadlali badlala ngokungacingi kwaye onke amagama ahlasela i-Crab yakho encinci njenge-dart. Uthando lwakho novelwano luyawaphilisa loo manxeba. Ngokukwanjalo uya kufumana umntwana wakho onomhlaza ukuba amkhulise kwaye amkhathalele.
Umhlaza womhlaza we-zodiac uthanda umzimba kwaye xa ungaziva 'ulungile' baya kuzama ukwenza izinto zibengcono. Xa olu luqwalaselo luphosakele ngokungalunganga umntwana onomhlaza unokufumana istrippy, azibeke kwisifundo ngakumbi nangakumbi.
Nangona kunjalo, oku kuya kudlula. Ekugqibeleni iyunithi yosapho ityisa umphefumlo womntwana onomhlaza. Baya kuhlala bebuyela kulaa ndawo kugxilwe kuyo.
Yintoni enye onokuyilindela kumntwana wakho onomhlaza? Zininzi iinyembezi. Ezi ntsana zamanzi zilawulwa yinyanga. Njengomzali isitshixo kukumisela ukuba yeyiphi eyona nto kwaye xa besebenzisa iinyembezi njengezixhobo.
Kubo bonke ubomi babo baya konwaba imibala eqaqambileyo, enempilo, ukutya okumnandi kunye nothando. Umhlaza womntwana unokwenzakala ngokulula, nokuba uneqokobhe elingaphandle elilukhuni. I-TLC encinci evela kumama notata ilungisa ngokulula uninzi lwezi meko.
Ukuba ungumzali wentombazana enomhlaza uya kuthi ulonwabele ngokwenene eli thuba. Olu phawu lwenkwenkwezi lunovelwano olomeleleyo kunye nokunqwenela ukuhlala nzulu koxolo jikelele ekhaya. Ingxaki kuphela kukuba iimvakalelo zakhe ziyanyibilika kwaye ziyahamba njengenyanga. Uzakufuna umonde omncinci xa ujongene naye, ngakumbi xa ufunda utshintsho olwenziwe kwiimvakalelo zakhe.
Ngelixa intombi yakho enomdlavuza inokuthemba, ubuntu bayo obungaphakathi buyalela ukuba icothe kakhulu ukuthemba abantu abangaphandle kwesangqa sayo. Ufuna ukufumana umntu omnye okanye ababini abaziva ukuba angabathemba. Xa ijongene nokwaliwa, intombazana yomhlaza ibalekela ngokulula kwiqokobhe layo, ifuna indawo engcwele yangaphakathi yokuphilisa. Ngokukodwa kwiminyaka emncinci uyakufumana intombazana yakho inqwenela ukhuseleko. Ezinye zeendlela ezilungileyo zokubonelela oko kukuhlala rhoqo kusapho kwaye ubonise iimvakalelo zakho rhoqo.
Akukho nto inyanzelisayo ngomntwana wakho. Ucinga ngayo yonke into ezantsi ukuya kwiminutia. Oku akukuphazamisi ubuchule bakhe nangayiphi na indlela. Uya kufumanisa ukuba intombi yakho iyaluthanda lonke uhlobo lobugcisa oluqala ukufota kunye nokupheka ukuya ekubhaleni nasekungqungqeni. Esi sisixhobo esihle seCancerian yakho. Ngokuqinisekileyo ikhuthaze!
Ngalo lonke olu thando unokucinga ukuba ukukhulisa intombi yaseCancer kukuhamba ngenxalenye. Yazi, nangona kunjalo, ukuba banokuba ngamantombazana aneenkani kakhulu. Nje ukuba abeke uluvo uyakulinda ngomonde ukuba uvumelane naye-okoko kuthatha! Oku kuninzi okunokuthanani nokuphazamiseka kulo naluphi na uhlobo lokujongana. Bangathanda ukuhlala ngaphandle kwesaqhwithi. Elona xesha kuphela apho intombi yakho iya kulwa khona kukuba baziva besoyikiswa (okanye baziva ukuba icandelo losapho lisemngciphekweni).
Xa intombazana yakho yeCancer ifikelela kumanqwanqwa ungamangalisi ukuba ibonakala inyamalala. Kanye njengononkala, kufuneka alahle igobolondo elidala kwaye afumane into enkulu, efanele umntu lowo aya kuye. Eli xesha libaluleke kakhulu kubuntu beCancer. Kuxa ziqhubekeka kwaye zilungisa kwaye zibuyele ebomini zinombono omtsha.
Inkwenkwe yakho yomhlaza ineentloni kwaye iyimfihlo. Ngamanye amaxesha kunzima kakhulu nokuba umzali okrelekrele ayifunde. Nokuba nosapho kuthatha ixesha ukuba unyana wakho afudumele ebantwini. Ulumkile njengesabhokhwe kwaye unemfesane kodwa ulawulwa ngamandla ziimvakalelo zakhe. Xa inkwenkwe yomhlaza iziva ngokunzulu zonke iinyani ezisehlabathini aziyi kuba namsebenzi.
Olunye lweempawu zakhe ezithandekayo ngakumbi kukuba ngaphambili kwekhaya uyakufumana unyana wakho ecinga kakhulu. Ukhathalele indawo yakhe kwaye ugcina uxolo. Xa usapho lusilwa, unyana wakho onguCancer uyokonwaba kakhulu kwaye uhlala ebuyela umva kude kuphele isiphithiphithi. Nalapho xa evela uya kwenza ngononophelo. Uya kudinga ukuqinisekiswa kunye nexesha elithile lomgangatho ukuze bangaziva belahliwe.
Njengomyalelo wentombi yomhlaza ubaluleke kakhulu kunyana wakho njengoko kunjalo ngezinto zabo. Akanyolukanga, unokhetho oluthile. Le yinkwenkwe enye ekufuneka uye nayo ezivenkileni, hayi ukukhetha into oyithandayo.
Ngokumalunga namandla osapho, enye yeempawu zomfana onomhlaza ezixhaphakileyo kukuba unamaqhina awomeleleyo nonina kunye nemvakalelo yokunyaniseka kosapho lonke. Njengayo yonke enye into ebomini bakhe, nangona kunjalo, oku ngekhe kuhlala kubonakala. Utshintsho ligama lomhlaza eliphakathi.
Rhoqo kungelilo unyana wakho ngumzimba wasekhaya. Uthanda ubudlelwane obusondeleyo kunye nemvakalelo yokukhuseleka. Uya kutsalela ebantwini ababonisa umdla kusapho lwakhe nakwiimeko ezithathwa njengezikhuselekileyo. Ukuba sesichengeni kwakhe kutsala abantu kuye ngokwemvelo, sesona sizathu sokuba unyana wakho onomhlaza ukuba akhathalele ekukhetheni abahlobo.
Imihla yoMhlaza: Ngeye-21 kaJuni- kaJulayi 20
Uphawu lomhlaza: Unonkala
Umhlaza wePlanethi: Inyanga
Umhlaza wokuzalwa: Pearl (ngoJuni); URuby (EyeKhala)
Umhlaza weentyatyambo: Larkspur
Umhlaza Umbala: Violet , LuLwandle oluhlaza & Isilivere
Usuku lomhlaza: uMvulo
i-aries eyindoda kunye ne-gemini yabasetyhini ebhedini
itaurus umfazi taurus indoda ehambelana neenkwenkwezi
ukuthandana gemini indoda kunye sagittarius umfazi